RBM amin'ny fampiharana | Hanan-dranomasina
Ny mpitantana manerana an'izao tontolo izao dia mampiditra ireo foto-kevitra momba ny fitantanana miorina amin'ny famoronana (RBM) amin'ny asany sy ny drafitr'izy ireo ho an'ny ho avy amin'ny fampahalalana avy amin'ny fanombanana ny faharetana sy ny fitantanana ireo rafitra sosialy-ekolojika mitambatra. Ireto ambany ireto misy ohatra vitsivitsy momba ny drafitra sy fanaon'i RBM holistic. Diniho ireto tranokala sy fanolorana manaraka ireto mba hahitana ny fomba ampiharana ny RBM maneran-tany.
Aostralia: Sarintanin'ny Great Barrier Reef Marine Park
Ilay manam-pahefana momba ny sambo zaridaina lehibe misokatra amin'ny varavarankely vaovaoReef Blueprint ho an'ny famoronana mamaritra ny zava-tsarotra atrehin'ireo terebak'i Aostralia amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy, ny hetsika izay horaisin'ny firenena hanamafisana ny fahamboniana ny haran-dranomasina, ary ny fahafahany miverina aorian'ny fanelingelenana ary miverina amin'ny toe-pahasalamana. Io no famoahana voalohany indrindra amin'ny fihaonana an-tampon'ny taona 2017 natrehin'ireo mpitantana ny zaridaina an-dranomasina, tompona nentim-paharazana, masoivoho governemanta, andrim-pikarohana, vondrona indostrialy, mpampiasa ny vondro, ary mpandray anjara hafa. Ny Blueprint dia narafitra manodidina ny 10 ny lahasa lehibe mifantoka amin'ny famoahana tombontsoa ambony indrindra amin'ny famerenana ny vatohara.
Jereo ny fanolorana Sarintanin'ny Great Barrier Reef Marine Park ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaomisintona ny fampisehoana PDF:
USA: NOAA Fandaharanasam-piarovana ny harena an-dranomasina
Ny fandaharam-pandrindrana amin'ny vatohara anyAAAAAA misokatra amin'ny varavarankely vaovaoStrategic Plan dia hitarika ny asa fikarohana sy fiarovana ny haran-dranomasina amin'ny ho avy. Manoritra paikady voadio hanatsarana ny fahaizan'ny fiovan'ny toetr'andro, hanatsara ny faharetan'ny jono ary hampihena ny loharanon'ny fahalotoan'ny tany, sady manampy ny asa vaovao hamerenana amin'ny laoniny ny vatohara. Ny "andry" efatra an'ny Fandaharanasa ny fiarovana ny haran-dranomasina NOAA dia ny hamahana ny fandrahonana telo voalohany ekena amin'ny haran-dranomasina ary hanohana ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina.
Jereo ny fanolorana NOAA Fandaharanasam-piarovana ny harena an-dranomasina ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaomisintona ny fampisehoana PDF:
Ny Initiative Reefilient Reefs dia miatrika ny fanamby amin'ny fampidirana - sy ny fanamafisana - ny faharetan'ny haran-dranomasina sy ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana, ireo mpitantana ny haran-dranomasina ary ireo manam-pahaizana momba ny faharetana manerana ireo tranokala haran-dranomasina dimy. Ity fomba vaovao feno fahasahiana ity dia mametraka ny olona ho ivon'ny fandraisana fanapahan-kevitra, manangana fomba fanao mahazaka manerantany hanavao, hanangana fahaiza-manao ary hitarika fomba fiasa iray amin'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo hamahana ireo fanamby atrehin'ireo vatohara sarobidy ananantsika.
Tao anatin'ny efa-taona mahery, ny Rosiana Resilient dia manangona io asa io miaraka amin'ireo toerana haran-dranomasina voatanisa an'habakabaka dimy isan-karazany ao amin'ny World Heritage izay voatanisa: Great Barrier Reef, Australia; Farihy Ningaloo, Aostralia; Lagoons any New Caledonia; Rafitra mitahiry toha-dranomasina ao Belize; ary ny Nosy Rock Lagoon, Palau. Ny Resilient Reef dia mamatsy vola ny drafitry ny fanavaozana maharitra, ny fanamboarana ny fahafaha-manao ary ny fampiharana ao amin'ireo tranokalan'ny mpanamory. Tafiditra ao anatin'izany ny famatsiam-bola sy ny fampiofanana ho amin'ny andraikitry ny fitarihana vaovao - ny Lehiben'ny Mpanatanteraka Famoronana — ao amin'ny manampahefana fitantanana ny harato eo an-toerana.
Resilient Reef dia fiaraha-miasa eo amin'ny Great Barrier Reef Foundation, BHP Foundation, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoProgramme UNESCO World Heritage Marine Program, Ny tambajotran-tsoratry ny haran-tsoratry ny voajanahary, Rakitry ny tanàna miorim-paka ary AECOM.
Jereo ny famelabelarana momba ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanatanjahan-tena mahomby ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaomisintona ny fampisehoana PDF:
Paikadin'ny tanjaky ny vatohara Guam Coralmanokatra fisie PDF
The misokatra amin'ny varavarankely vaovao Paikadin'ny tanjaky ny vatohara Guam Coralmanokatra fisie PDF (GRRS) dia rafi-pandrafetana sy stratejika hitarika ny fitantanana ny vatohara ao Guam. Ny tanjon'ny GRRS dia ny famahana ny fahasahiranana eo an-toerana ary ny fampivoarana ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina haran-dranomasina ao Guam ary ny fiarahamonin'olombelona amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetran'ny taona 2025. , fikambanana tsy mitady tombony ary orin'asa tsy miankina mandritra ny telo taona. Tamin'ny Jona 56, ny Governemanta Guam dia nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny GRRS, ary nitaky ny hanatanterahana azy avy hatrany.
Torolàlana an'ny RBM avy amin'ny mpitantana, siantifika ary mpanamboatra politika
Tamin'ny 2019 misokatra amin'ny varavarankely vaovaoInternational Coral Reef Initiative (ICRI) Fihaonana ankapobeny, mpitantana, mpahay siansa, ary mpamorona politika dia nanadin-tsaina sy niady hevitra momba ireo fanamby lehibe, fotoana, filàna fifandraisana, ary ny laharam-pahamehana ho fanamboarana sy hampiharana ny RBM. Ity ambany ity no misongadina amin'ny fandinihana, ny heviny ary ny soso-keviny, izay nanosika ny ICRI hamorona komity ad hoc hamantatra ny fanohanana sy hamolavola torolàlana tsara indrindra amin'ny hetsika izay ahafahan'ny mpikambana manangana ny RBM hihaona amin'ny filàna eo an-toerana, nasionaly sy manerantany. .
Ity ambany ity ny lisitr'ireo mety ho azon'ny RBM manome ho an'ny mpitantana ary koa ny fotoana hampitomboana ny fananganana ny RBM:
Manome hery ireo mpanao fampiharana amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny maha-zava-dehibe ny hetsika eo an-toerana, manome fotoana hitantanana vatohara manoloana ny fiovan'ny toetr'andro, ary mampifandray ny fitantanana ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny olombelona.
Mampiasa ny tombana fanaraha-maso ny vatohara misy (ohatra ny marefo sy fanombanana momba ny fitsanganana) fampahafantarana ireo faritra voalohany amin'ny fitantanana.
Mamela ny fitantanana ireo fiantraikany marobe, manome tombontsoa mitambatra (anisan'izany ny tombontsoa ara-toe-karena) amin'ny asa iray, midika izany fa fomba mahomby sy mahomby.
Mampiroborobo ny tombontsoa azo sy fivelomana (ohatra: ny tontolo iainana mahasalama dia mety hiteraka fidiram-bola amin'ny alàlan'ny hetsika fizahan-tany).
Mampiditra ireo masoivoho sy mpiombon-draharaha izay tsy dia mandray anjara amin'ny fitantanana ny vatohara, toy ny indostrian'ny sehatra tsy miankina, mba hitondrana fomba fijery vaovao sy loharanon-karena.
Azonao atao ny mamela ny fidirana amin'ny famatsiam-bola amin'ny toetr'andro.
Fahafahana mandrindra ny RBM amin'ny politikam-pirenena sy drafitra.
Ny fahafantarana ny fanamby amin'ny fampiharana ny RBM mialoha ny fotoana dia mety hanampy amin'ny famolavolana sy famonoana:
Ny fifandanjana amin'ny vokatra fohy sy ny fotoana maharitra: Ny dingana fanarenana ny tontolo iainana sy ny fampifanarahana ao anatin'ny rafitra sosialy dia matetika mitranga mandritra ny taona maro na am-polony taona, ary io tsy fahazoana antoka sy fotoana maharitra io mba hahitana ny valiny dia mety ho sarotra ny hifandray amin'ireo vondrona mpiray tsikombakomba ary mety hisy fiantraikany amin'ny finiavana politika amin'ny RBM.
Fanekena politika ny RBM: tsy fisian'ny finiavana na fahatakarana politika, na fanoherana ireo mpanapa-kevitra hanova ny fomba fitantanana ankehitriny, dia afaka hanao fanamby ny RBM hanatanterahana.
Serasera ny angon-drakitra siantifika: Ny fifandraisana tsy mahomby eo amin'ny mpahay siansa, ny mpitantana ary ny mpanao politika dia mety hitranga rehefa misy "fiteny" samy hafa ampiasaina mba hilazana ny maha-zava-dehibe ny fikajiana ny vatohara sy ny RBM na valiny avy amin'ny fikarohana siantifika. (Jereo ny tabilao Fifandraisana.)
Fitantanana tontolon'ny rafitra socio-ekolojika: mety tsy ampy ny fahaiza-manao (ohatra, ny manam-pahaizana siantifika, ny fahaizana, ny famatsiam-bola ary ny fotoana) ilaina amin'ny fanombatombana, fitantanana ary fanaraha-maso ireo lafiny ara-tsosialy sy tontolo iainana.
Mitantana ny tsy fahatokisan-tena: Ny RBM dia mitaky fitantanana mavitrika hanangana hery manoloana ny fiovana amin'ny ho avy na eo aza ny tsy fahazoana antoka sy ny mety ho fisafidianana mety hitranga.
Fivarotana azo tsapain-tanana eo amin'ny sandan'ny ekolojia sy sosialy: singa manan-danja amin'ny RBM dia ny fampifangaroana ireo rafitra ara-tsosialy amin'ny fanamafisana ny fiovana sy ny fanovana, izay mitaky ny fampitana ny maha-zava-dehibe ny soatoavina ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ary miara-miasa amin'ireo mpandray anjara mavitrika.
Ny tsy fahavononan'ny tsy fahombiazana: Ny ampahany amin'ny RBM dia manandrana fomba fiasa vaovao, izay mitaky fanekena avy amin'ny ankolafy rehetra amin'ny fitsapana sy ny fahadisoana, ny fampifanarahana ary ny fianarana amin'ny tsy fahombiazana.
Ny fanamby amin'ny fametrahana RBM dia matetika ny fampitana ny lanja sy ny tanjon'ny RBM ary ny fametrahana ny fanantenana andrasana amin'ireo vondrona mpiray tsikombakomba samihafa. Ny fanatanterahana ny RBM mahomby dia mitaky ezaka fifampiresahana be dia be eo anelanelan'ny masoivohom-pitantanana, mpahay siansa, vondron'olona, ​​indostria ary mpanao politika miaraka amin'ny manam-pahaizana amin'ny serasera. Anisan'izany ny torohevitra:
Tariho ny hafatrao amin'ny mpihaino anao: fantaro hoe iza no mpihaino anao ary inona no tena zava-dehibe amin'izy ireo; “Hikasika ny fony sy ny sainy” amin'ny alàlan'ny fampivoarana hafatra, tantara ary fampiasàna fitovian-kevitra izay mitovitovy amin'ny mpihaino anao; ary ataovy azo antoka fa tsotra sy azo idirana ny hafatra.
Mandefasa hafatra amin'ny alàlan'ny mpitondra hafatra azo antoka (feon) azo itokisana amin'ireo mpihaino kendrena anao.
Amin'ny maha vondron-draharaha fitantanana, fantaro ireo hafatra lehibe ifampizarana manodidina ny hery sy ny RBM ary asio marika. Ny teny hoe "faharetana" dia midika zavatra samihafa amin'ny olona samy hafa. Ny hafatra lehibe dia tokony hampifanaraka, raha ilaina, miorina amin'ny fantatry ny mpihaino anao momba ity lohahevitra ity. Tena ilaina ny manazava ny faharetana sy ny RBM amin'ny resaka hevitra sy teny takatry ny mpihaino anao.
Raha mila toro-hevitra momba ny hafatra hafa dia tsindrio Eto.
Ny fiofanana ho an'ny tarika samy manana ny toerany dia hita ho toy ny tombontsoa lehibe amin'ny fampivelarana ny fahafaha-manao RBM amin'ny fomba mahomby. Ohatra amin'izany ny fananganana ny fahalalana eo amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana amin'ny alàlan'ny serasera sy ny programam-tsiansa olom-pirenena Ny masoivohom-pitantanana dia mety mitaky fiofanana ara-teknika mba hanomezana azy ireo hitarika sy hamaritana ny fizotrany sy ny tombotsoan'ny RBM amin'ireo manampahefana amin'ny fanapaha-kevitra lehibe. Ireo tolo-kevitra manokana dia misy:
Ampio ny mpitarika hahatakatra ny tanjon'ny RBM sy ny fomba fiasa ary ny tombontsoa azo.
Ampio ny sehatra tsy miankina (ohatra banky sy ny orinasa fiantohana) hahatakatra ny RBM, ny siansa ary ny anjara toerany ho fanarenana sy ny fitantanana bebe kokoa.
Manomeza fiofanana momba ny famatsiam-bola maharitra, ny famakafakana eo amin'ny mpiara-miombon'antoka, ny fomba fahazoana vola sy famolavolana fiaraha-miasa ary ny lohahevitra hafa laharam-pahamehana.
Manangana vondronà fiasa izay afaka mampiroborobo ny fizarana fahalalana ary manampy an'io handroso io.
Ny fandaharam-pandrindrana momba ny serasera momba ny serasera